Burcad Badeed Dhameysatay Xukun Maxkamadeed oo Lagu Celiyay Soomaaliya”Sawirro” – Radio Muqdisho
Safiirka Dowlada Soomaaliya u fadhiya Dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan iyo Qunsulka Safaarada Cali Maxamed Shiikh Cali Begadi ayaa deeq dhar ah gudoonsiiyay 7muwaadin oo soomaali ah,kuwaasi oo magaalada Mombasa ku so dhameystay xabsi 7-sano ah,ka dib markii lagu eedeeyay falal burcad baeednimo ah.
Muwaadiniinta todobada ah oo soo dhameystay xukunka maxkamadeed ayaa sheegay in ay yihiin kaluumeysato oo aysan galin danbiga burcad badeednimada ah ee lagu eedeeyay,waxaana maanta dib loogu celiyo dalkooda hooyo ee soomaaliya.
Dib u celinta muwaadiniintan soomaaliyeed ayaa waxaa iska kaashanayay safaarada Soomaaliya,xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan danbiyada iyo muqaadaraadka ee UNODC iyo waaxda Socdaalka ee dalkani Kenya.
Qaar ka mid ah muwaadiniintan soomaaliyeed ee soo dhameystay xukunka maxkamadeed ee todobada sano ah ayaa ka sheekeynaya dhibaatoyiinkii ay la soo kulmeen mudadii ay xabsiga ku jireen,iyagoona u mahad celiyay mas’uuliyiinta safaarada Soomaaliya ee dalkani Kenya.
Danjiraha Dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Mxamed Xasan ayaa la dar daarmay muwaadiniitan soo dhameystay xukunka maxkamadeed,waxana uu sheegay ina y dadaal ugu soo deynta muwaadiniin kale oo iyaguna ku eedeysan falal burcad badeednimo,kuwaasi oo ku xiran xabsi ku yaalo magaalada Mombasa.
Bishii sagaalaad ee sanadkii hore ayey ahayd markii ay mas’uuliyiinta safaarada Soomaaliya ee Dalkani Kenya ay magaalada Mombasa ku booqdeen maxaabiista Soomaaliyeed oo ku eedeysan falalka burcad badeednimada ah.
Sawir qaade:- Hassan Omar Baffo
Mudanayaal ka tirsan baarlamanka Soomaaliya oo ka qeybgalay kulanka baarlamaannada Afrika+Sawirro